Banaadir vs Galmudug: Tartanka maamul Goboleedyada iyo Gobolka Banaadir oo maanta ka furmaya Muqdisho – Gool FM
Banaadir vs Galmudug: Tartanka maamul Goboleedyada iyo Gobolka Banaadir oo maanta ka furmaya Muqdisho
Haaruun December 20, 2020
(Muqdisho) 20 Dis 2020. Kaddib muddo ay u hilowsanaayeen mucaashaqiinta kubadda cagta tartanka maamul Goboleedka iyo gobolka Banaadir ayaa galabta shucladdiisa laga daari doona garoonka Eng Yariisow ee dhaca degmada Cabdicasiis ee gobolka Banaadir.
Tartanka maamul goboleedka ayaa in la qabto waxaa ugu dambeysay sanadkii 2017-kii, xilligaas uu ku guuleysatay xulka Jubbaland.
Waa sanadkii saddexdad oo uu marti galinayo tartankan garoonka cawska macmalka ah uu yaalo ee Eng Yariisow (Ex Koonis), inkastoo garoonkan uusan u hiillin xulka gobolka Banadir labadii sano ee la soo dhaafay.
Caadiyan tartankan waxaa ka qeyb qaata shan maamul goboleed iyo gobolka Banadir, kuwaas oo kala ah Hirshabeelle, Jubbaland, Puntland, Koonfur Galbeed, Galmudug iyo Gobolka Banaadir.
Qofna iskama indho tiri karo In kani uu yahay tartanka ugu daawashada badan gudaha dalka, haddana sanadkan wuu ka sii xiiso badan yahay sanadihii hore, maadaama wajiyo cusub lagu arki doono.
Taariikhda fog marka laga eego Jubbaland ayaa ah hooyada tartankan Waxaana ay guuleysatay tirada ugu badan.
Tartankan lama qaban labo sano xiriir ah, balse sanadkan ayay nasiib ay u yeelan doonaan in taageerayasha ay arkan tartanka maamul goboleedyada, iyadoo uu jiro Korona Fayras haddana waxaa la filayaa in galabta Jamaahiir badan ay camiraan garoonka Eng. Yariisow.
Tartankan sanadkan waxaa nasiib u yeeshay oo lagu daah furi doonaa martigaliyeyaasha tartanka ee Xulka Banaadir iyo Maamul Goboleedka Galmudug.
Ciyaartan ayaa ah mid aad u xiiso badan marka laga soo tago xifaaltanka labadan xul, balse waxaa ku hoos duugan xifaaltan Tababarenimo ee u dhaxeeya Macallin Daadir amiin oo hoggaaminaya Banaadir iyo Axmed Tahliil oo horkacaya xulka Galmudug.
Labadaan macallin waxaa jira xifaaltan soo jireen ah marka dib loogu laabto waqtiga ciyaaryahannimo, waxay kala matali jireen labadii kooxood ee ugu taageerayasha badnaa ee LL PP Jeenyo iyo Banadir Sports Club oo iminka la yiraahdo MCC.
Sidoo kale xifaaltankan labadaan Tababare waxaa macno u sii yeelaya inay markii ugu horreysay ay ka soo muuqanayaan kursiga macallinimo ee tartanka maamul goboleedyada, iyagoo hore isku soo arkay marka laga hadlo xirfadooda macallinimo.
Hadaba Halkan ka Akhriso Sida Horay Loogu Kala Guuleystay tartankan:-
Tartankan xilligii burburka ka hor waxaa loo tartami jiray 18 gobol oo dalka ah, waxaa gobollada isku reereebi-jireen sida ay daris u yihiin, si ugu dambeyntii tii awood badan koobka u ciyaarto.
Taariikh ahaan, gobollo waxaa jirta koobka qaadistiisa ku caan baxay, kuwoo aan weligood qaadin iyo gobollo aanba weligood iman koobka.
Burburkii ka Hor: Gobolka Jubbada hoose waxaa uu qaaday 8 jeer, Shabeellada hoose 3 jeer, Shabeellada dhexe 3 jeer, Waqooyi galbeed iyo Banaadir mid hal jeer.
Burburkii Kaddib: 2010-kii markii dib loo bilaabay, tartan lagu qabtay Garoowe waxaa ku guuleystay gobolka Banaadir, halka tartankii kale ee xigay ku guuleysteen ciyaar-toydii ka socotay Puntland.
Haddii marka aan qaab maamul goboleed u qorno waxaa ay noqoneysaa sidan:-
Jubbaland: 9 Jeer
Koonfur Galbeed: 3 Jeer
Banaadir: 2 Jeer
Hirshabeelle: 3 Jeer
Puntland: 1 Jeer
“Nasiibku nama garab istaagin.” –Tababare Arteta oo ka hadlay guuldarradii ay kala kulmeen Everton
Halyeey kooxaha Arsenal iyo Chelsea oo ku dhaleeceeyay Man United lacagtii ay ku bixisay saxiixa Harry Maguire